साउदीमा शनिबार १४ सय कोरोना निको, कुल संक्रमित तीन लाख ६ हजार नाघ्यो -
साउदीमा शनिबार १४ सय कोरोना निको, कुल संक्रमित तीन लाख ६ हजार नाघ्यो
कुल कोरोना निको हुनेको संख्या दुई लाख ७८ हजार नाघ्यो
७ भाद्र २०७७, आईतवार ०६:४२ । साउदी अरेबिया
साउदी अरेबियामा शनिबार कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को उपचार गरिरहेका १ हजार ३७४ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
उक्त संख्यामा उपचारपछि घर फर्किएको यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.मोहम्मद अल अब्दुलीले जानकारी दिए । प्रवक्ता डा.अब्दुलीका अनुसार साउदीमा कुल कोरोना उपचारपछि निको हुनेको संख्या दुई लाख ७८ हजार ४४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यसैगरी यहाँ आज कोरोना भाइरस नयाँ संक्रमित १ हजार १८४ जना थपिएको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले बताए । उनकाअनुसार कुल कोरोना संक्रमित तीन लाख ६ हजार ३७० जना पुगेका छन् ।
यहाँ अब कुल संक्रमितमध्ये २४ हजार ३१० जनाको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । ‘ तीमध्ये १ हजार ६५२ जना गम्भीर अवस्था उपचाररत हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता अब्दुलीले भने ।
यस्तै साउदीमा हालसम्म ३ हजार ६१९ जना कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भैसकेको प्रवक्ताले बताए । उनका अनुसार शनिबार मात्रै ३९ जनाको मृत्यु भएको हो ।
शनिबारको अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितभन्दा उपचारपछि निको हुनेको संख्या १९० जना बढी रहेका छन् ।
थप यो पनि
•साउदीमा अकामा नभएका थप १२० जनाको एक्जिट भिसा (नामसहित)
•साउदीमा शुक्रबार पनि १६ सय जना उपचारपछि घर फर्के
•साउदीमा चौबीस घन्टापछि पुनः कोरोना निको हुने बढ्यो, कहाँ कति उपचार हुँदै ?
साउदीमा शुक्रबार दुई गुणा कोरोना निको, नयाँ संक्रमित ४७२ जना
१. साउदीमा शुक्रबार दुई गुणा कोरोना निको, नयाँ संक्रमित ४७२ जना
२. औपन्यासिक तत्वको कसीमा तामाङ उपन्यास ‘प्राङ्बोला छेटाङ’
३. जनरल इन्स्योरेन्सको ३० करोड आइपिओ आउदै
४. कुमाल समाज साउदीको पहलमा दुई नेपाली स्वदेश फर्काइयो
५. अनलाइन एकल नृत्य सम्पन्न
६. अब वालेटबाट रेमिट्यान्स सेवा